Yakobo Nhoma No 2:1-26
Animhwɛ yɛ bɔne (1-13)
Ɔdɔ yɛ mmara kunini (8)
Gyidi a nnwuma nka ho awu (14-26)
Ahonhommɔne gye di na wɔn ho popo (19)
Wɔfrɛɛ Abraham Yehowa adamfo (23)
2 Me nuanom, gyidi a yɛwɔ wɔ Awurade Yesu Kristo a ɔyɛ yɛn anuonyam mu no, mode animhwɛ na ekura mu anaa?+ 2 Yɛmfa no sɛ obi a sika kɔkɔɔ mpɛtea hyehyɛ ne nsa na ɔhyɛ ataade fɛfɛ aba baabi a moahyia, na ohiani bi nso a ɔhyɛ ataade fĩ aba hɔ. 3 Sɛ motew mo anim hwɛ nea ɔhyɛ ataade fɛfɛ no ka kyerɛ no sɛ: “Bɛtena baabi pa,” na ohiani no de, moka kyerɛ no sɛ, “Gyina hɔ,” anaa “Tena agua a me nan sisi so yi nkyɛn” a,+ 4 ɛno nkyerɛ sɛ muyiyi nnipa mu,+ na moabɛyɛ atemmufo a mubu atɛnkyea+ anaa? 5 Me nuanom adɔfo, muntie. Ɛnyɛ wiase no mu ahiafo na Onyankopɔn apaw wɔn sɛ wɔmmɛyɛ adefo wɔ gyidi mu?+ Na ɛnyɛ wɔn na wɔayɛ wɔn adedifo* wɔ Ahenni a wahyɛ bɔ sɛ ɔde bɛma wɔn a wɔdɔ no+ no mu anaa? 6 Nanso mubu ahiafo animtiaa. Ɛnyɛ adefo na wɔhyɛ mo so+ na wɔtwe mo kɔ asɛnnibea? 7 Din pa a Onyankopɔn de ama mo no, ɛnyɛ wɔn na wɔka ho asɛmmɔne? 8 Enti mmara kunini* a ɛwɔ kyerɛwsɛm no mu sɛ: “Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho”+ no, sɛ mudi so a, na morebɔ mmɔden paa. 9 Nanso sɛ mokɔ so yɛ animhwɛ+ a, na moreyɛ bɔne, na mmara no bu mo fɔ* sɛ moyɛ mmaratofo.+ 10 Sɛ obi di Mmara no nyinaa so na obu emu asɛm baako so a, wadi ne nyinaa ho fɔ.+ 11 Efisɛ nea ɔkae sɛ: “Nsɛe aware”+ no, ɔno ara na ɔkae sɛ: “Nni awu.”+ Enti sɛ woansɛe aware nanso wudi awu a, woato mmara. 12 Monkɔ so mma mo kasa ne mo nneyɛe nkyerɛ sɛ moade mo ho, na wɔde nnipa a wɔade wɔn ho mmara*+ na ebebu mo atɛn. 13 Na nea onhu nnipa mmɔbɔ no, ɔno nso wɔrenhu no mmɔbɔ wɔ atemmu mu.+ Mmɔborɔhunu tumi di nkonim wɔ atemmu so. 14 Me nuanom, sɛ obi ka sɛ ɔwɔ gyidi nanso nnwuma nka ho a, mfaso bɛn na ɛwɔ so?+ Saa gyidi no betumi agye no nkwa?+ 15 Sɛ onuabarima anaa onuabea bi nni ataade a ɔbɛhyɛ* ne aduan a ɛbɛso no da no mpo, 16 na sɛ mo mu bi ka kyerɛ no sɛ: “Fa asomdwoe kɔ, na wo ho nyɛ wo hyew na mee,” na moamma no nea nipadua no hia a, mfaso bɛn na ɛwɔ so?+ 17 Saa ara na gyidi nso te; sɛ nnwuma nka ho a, na awu.+ 18 Nanso obi bɛka sɛ: “Wowɔ gyidi, na me nso mewɔ nnwuma. Kyerɛ me wo gyidi a nnwuma nka ho no, na me nso memfa me nnwuma nkyerɛ wo me gyidi.” 19 Wugye di sɛ Onyankopɔn baako na ɔwɔ hɔ? Eye paa. Ahonhommɔne* nso gye di na wɔn ho popo.+ 20 O onipa a wunni ntease, wunnim sɛ gyidi a nnwuma nka ho yɛ gyidi hunu? 21 Ɛnyɛ nnwuma so na wɔnam buu yɛn agya Abraham bem bere a ɔde ne ba Isak kɔtoo afɔremuka so sɛ ɔde no rebɔ afɔre no?+ 22 Wo ara wunim sɛ ɔde nnwuma kaa ne gyidi no ho, na nnwuma na ɛmaa ne gyidi wiee pɛyɛ,+ 23 na kyerɛwsɛm no baa mu sɛ: “Abraham gyee Yehowa* dii, na wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni,”+ na ɛma wɔfrɛɛ no Yehowa* adamfo.+ 24 Moahu sɛ wɔnam nnwuma so na ebu onipa bem, na ɛnyɛ gyidi nkutoo so. 25 Tuutuuni Rahab nso, bere a ogyee mmarima a wɔsomaa wɔn no kama na ɔma wɔfaa ɔkwan foforo so kɔe no, ɛnkyerɛ sɛ nnwuma so na wɔnam buu no bem anaa?+ 26 Ampa, sɛnea nipadua a honhom* nnim awu+ no, saa ara na gyidi a nnwuma nka ho awu.+
^ Anaa “mmara a edi hene.”
^ Anaa “kasa kyerɛ mo.”
^ Nt., “ahofadi mmara.”
^ Nt., “da adagyaw.”